Xinhua Myanmar - သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ဘယ်လို တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့လဲ?
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်းရှီပြည်နယ် ရှီအန်းရှိ အမျိုးသားကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် ကျောင်းသားများ ကျောင်းအဝတွင် တန်းစီနေကြသည်ကို ဇူလိုင် ၇ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Politics, Law & Military
ပေကျင်း ၊ ဇူလိုင် ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ (သို့မဟုတ်) အထက်တန်းစာမေးပွဲကို ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ကျင်းပခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသား ၁၀ ဒသမ ၇၁ သန်းက နှစ်ပတ်လည်စာမေးပွဲကြီးကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြရာ COVID-19 ကပ်ရောဂါ စတင်ကူးစက်ချိန်နောက်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော အကြီးဆုံး အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က မကြာခဏဆိုသလို တရုတ်လူငယ်များအား တိုက်တွန်းအားပေးခြင်း နှင့် ထောက်ခံအားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါနည်း? ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းမေးကြည့်ပါမည် ။ သင်တို့ ဖြေနိုင်ပါ့မလား?
၁. သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် လူငယ်များအား နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိကြရန် ၊ အမျိုးသားသမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာကြရန် ၊ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ဆက်ခံကြရန် ၊ အမျိုးသားတန်ဖိုး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအပေါ် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရန် နှင့် အမိမြေ၏ အနာဂတ်အတွက် ၎င်းတို့၏ အတွေးအခေါ်များကို အနီးကပ် ချိတ်ဆက်ကြရန် တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါမှတ်ချက်စကားများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်က သမ္မတရှီ၏ မည်သည့်နေရာသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးသည့် ခရီးစဉ်တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသနည်း?
သဲလွန်စ : မက်စ်ဝါဒကို သုတေသနပြုရန် နှင့် ဖြန့်ဝေရန် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့သော တက္ကသိုလ် ။
အဖြေ - ပီကင်းတက္ကသိုလ်။
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန် နှင့် ပီကင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေ ၂ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ်(ဆင်ဟွာ)
(၂) ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရှီကျင့်ဖိန်က သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအစည်းအဝေးအပြီး ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်စောင်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မည်သည့် အထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားများ အခမဲ့ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိခဲ့ပါသနည်း။
သဲလွန်စ : အထူးသဖြင့် ဝေဂါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ အဓိက နေထိုင်ရာဒေသကြီးဖြစ်သည်။
ရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဝေဂါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ကြားနေကြသော အလယ်တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေ ၇ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဖြေ - ရှင်းကျန်း၏ တောင်ပိုင်းဒေသများ။
၃) ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် “ သန့်စင်သောနှလုံးသား ၊ တာဝန်ယူမှုရှိသော အသံ နှင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောအရည်အချင်း” နှင့် “ ပညာတတ်ခြင်း ၊ သနားကြင်နာခြင်း နှင့် တာဝန်ယူမှုများအတွက် အသင့်ရှိခြင်း” စသည့် အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသော လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သင့်ကြောင်းကို သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပေကျင်းမြို့ရှိ ဘေယီ(Bayi)ကျောင်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ယင်းခရီးစဉ်ကို “အောက်မေ့ဖွယ် လမ်းကျဉ်းလေး”ခရီးစဉ်တစ်ခုဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသနည်း။
အဖြေ: ရှီသည် ၎င်း၏ အလယ်တန်း နှင့် အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကို ပေကျင်းမြို့ရှိ အဆိုပါ ဘေယီကျောင်းတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန် ပေကျင်းမြို့ရှိ ဘေယီကျောင်းတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်က ဘောလုံးလေ့ကျင့်နေသော ကျောင်းသားများအား ကြည့်ရှုနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
(၄)ရှီက ၎င်းအနေဖြင့် လူငယ်များအား “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ထွန်းလင်းတောက်ပသောလူငယ်များ ၊ ၎င်းတို့၏ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနှင့်အတူ (အကြောင်းအချင်းအရာ) အပေါ် နားလည်းသဘောပေါက်နိုင်စွမ်းသော ခွန်အားများ ရှိရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရှီက မျှော်လင့်နေသော( အကြောင်းအချင်းအရာ) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ယင်းမှတ်ချက်စကားကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ထူးချွန်ထက်မြက်လူငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် သမ္မတရှီက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဖြေ - တရုတ်နိုင်ငံ၏ မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန် ပေကျင်းမြို့ရှိ အာကာသနည်းပညာအကယ်ဒမီမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ၂၀၁၃ခုနှစ် မေ ၄ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် ပေကျင်းမြို့ရှိ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ နှင့် ဥပဒေတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေ ၃ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ်(ဆင်ဟွာ)
(၅) သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က လူငယ်များအနေဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ကြောင်း နှင့် မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာ သုတအဖြာဖြာကို ( အရာဝတ္ထုတစ်ခု )ကဲ့သို့ မြဲမြံစွာစုပ်ယူ မှတ်ယူသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ (အရာဝတ္ထု) မှာ အဘယ်နည်း။ ယင်းစကားရပ်ကို ရှီက ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလက တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်ဥပဒေတက္ကသိုလ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သဲလွန်စ: ရေကို လျင်လျင်မြန်မြန် စုပ်ယူသန့်ရှင်းပေးသောအရာ
အဖြေ- ဖော့တုံး (Xinhua)